TALOOYINKA UGU SARREEYA EE DARYEELKA IYO CALEEMAHA EE IBERIS - SOOSAARKA DALAGGA
Siraha ah ee beerto iyo daryeellka dirista
Waraaqo xajmi ah, oo ka tirsan qoyska qallafsan, waxaa si fiican loo yaqaanaa xiriiriyeyaasha sariiraha alpine, walxaha ku jira tuubooyinka ubaxa, dhagaxyada. In muuqaal waxay u eg tahay kaabajka iyo dabocase. Iberis waa wax aan qabyo ahayn beerashada iyo daryeelka, sidaas darteed xitaa a gabbalaha casriga ah ayaa qaban kara.
Ma taqaanaa? Warshadu waxay ku heshay magaca magacii hore ee Spain - Iberia.
Dabeecadda, waxaa jira laba nooc oo ubax ah:
Iberis waa foomka caanaha sanadlaha ah;
Iberis perennial ee qaab baadiyaha ah.
Kordhinta waraaqaha laga soo qaado abuurka
Warshadu waxay kicisaa labada miraha iyo dhirta. Laakiin maadaama ay adag tahay in la iibsado ama la helo wax beerashada, inta badan ubaxa waxaa lagu faafiyaa abuurka.
Geedka loo beeray geedo
Marka cimiladu diiranto, waxaad ku beeri kartaa geedka ku yaal geedo. Sida caadiga ah, tani waa muddada laga bilaabo Maarso ilaa Maajo. Marka Beerta loo isticmaalo ciidda dabacsan, miraha waxaa la dhigaa qoto dheer oo ah 1 mm, rusheeyeen ciid caleenta sare on top. Awoodda leh dalagyada waxay u baahan tahay in la geliyo meel diiran, oo iftiin leh, daboolana weelka si aad u ilaaliso qadarka macquulka ah ee qoyaanka.
Waa muhiim! Geedo waa in aan la waraabin, oo si fiican u buufin sida loo baahdo.
Maadaama badeecadu ay leedahay nidaam xidid oo asal ah, ma qaadan karaan soo qaado. Ka hor inta beerto dhul furan, geedo waa in si taxadar leh looga saaraa weelka si aaney u waxyeeleynin xididada. Dhulku waa in yar yaraadaa oo la waraabiyaa.
Abuur abuurka dhulka banaan
Marka miraha guga la soo dhaafay ay soo noqdaan, waxaad ku beeran kartaa galka dhul furan. Goobta ugu fiican ee ay u noqon doonto waa dhul dijitaal ah oo dhul leh dhagax, ciid ciid ah. Tani waxay badbaadin doontaa qoyaanka ciidda ee ka soo kabashada iyo kiriimka rootka. Seeds waa in la dhigaa si habsami leh.
Caleemaha ugu horeeya waxaa laga arki karaa 10-15 maalmood. Waa in la qalajiyo si ay masaafada udhaxeysa dhirta ugu yaraan 12-15 cm. Haddii kale, waxaad ku beeran kartaan dhul furan iyo xilliga qaboobaha, xilliga dayrta. Tiknoolajiyada beerista waa isku mid sida guga. Caleemaha waa in la filaa dhammaadka Abriil - horraantii Maajo.
Wada-hawlgalayaasha iyo isticmaalaan naqshad dhuleed
Iberis waxaa loo isticmaalaa sidii monoculture ah ee qurxinta cawska iyo xuduudaha, iyo isku dhafka dhirta kale ee safafka, beeraha dhagaxyada, mixborders. Deriskaaga leh midabyo kale wuxuu si fiican u dulqaadanayaa. Wuxuu si fiican u koraa dhagaxyada. Ugu fiican dhammaantood, direyska waxaa lagu daraa alisium, phlox, obrietta iyo dilaaco kale.
Tulips, nooc kasta oo juniper ah, qoryuhu wuxuu noqonayaa dariiqooyin ku habboon ubax guga. Sidoo kale dhaqan ahaan waxaa lagu beeray calendula, petunia, pansies.
Ma taqaanaa? Iberis waxaa laga helaa inta badan cawska cawska.
Talooyinka Daryeelka Geedka
Daryeelka ubaxa ma ahan mid adag. Waa inaad siiso qaab nidaamsan, qaab isku dhafan. Waayo, tan waxay ku xiran tahay saddex meelood meel ka mid ah dhererka afkoda ka dib ubax. Sidoo kale samee ka saarista ubaxyada la jarjaray ee Iberis. Gawaarida faraha badan waa in la beeraa 5 sano kasta. Tani waxay hubinaysaa ilaalinta hawlaha xafladaha dhirta.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo ubax oo keliya cimilada qallalan.
Bacis Bacemis waa la iska ilaalin karaa, laakiin haddii aad ku quudiso warshad leh Bacriminta macdanta adag ee hal mar ama laba jeer xilli, waxay kuugu mahadcelineysaa daryeelida ubax gaar ah oo jilicsan.
Goorta la goosanayo iyo sida loo keydiyo miraha
Dalagyada miraha wax lagu duubo ma noqon doonto mid ku adag in ay beeraan. Waxay ka samaysan yihiin goobta ubaxa. Tan iyo tani waxay dhacdaa wakhti kasta, wax macno ah ma laha in la sugo xilliga dayrta si loo abuuro abuurka. Waxay u fiicantahay inaad u qaadato waxbarashada. Gobollada la uruuriyay waxay u baahan yihiin waxoogaa qallalan oo meel diiran ah, ka heli abuurka iyaga.
Waxyaalaha abuurka waa in lagu kaydiyaa meel qalalan, oo qabow. Qaar ka mid ah kuwa bannaanka u doorbida inay soo saaraan Iberis is-abuuris. Xaaladdan, guga waa in si taxadar leh u caleemaha khafiif ah.
Sida loo diyaariyo direyska dilka ah ee jiilaalka
Iberis noocyada dilka ah inta badan u-u adkaysta dhaxan. Laamihii beertaa, oo si dhow u dhexdhexaad ah, waxay kaa caawinayaan in ay sii socdaan qoyaan iyo kuleyl. Si kastaba ha noqotee, barafka iyo barafka barafka leh, ma noqon doonto mid aad u macquul ah si loo daboolo warshadda leh caleemo ama cirbado dhacay. Tani waxay xaqiijinaysaa ammaanka ubaxa illaa guga.
Sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurrada
Iberis waxay leedahay difaac adag oo cudurro, laakiin dabeecadda nidaamka xididku waxay u nugul yihiin caabuqyada fangas. Calaamadaha iskutallaabta caleenta qorraxda ah ee Iberis waa qaabka koritaanka ee xididada, oo leh muuqaalka kaansarka. Tani waxay keenaysaa geedka inuu joojiyo koritaanka. Sababtoo ah cudurka, caleemaha si tartiib tartiib ah ayay u noqotaa huruud iyo fade.
Waa muhiim! Kila si buuxda ayuu u burburiyaa geedo yar yar. Dhirta qaangaarka ah, waxay joojinaysaa horumarka.
Iyada oo rhizoctoniosis, dhibco caarada leh dhibco madow muuqata on caleemaha. Bilow in ay ku engegaan afkoda. Si looga hortago cudurradan, horis ka hor laga beerto waxaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo bogga leh fungicide. Haddii caleemaha xididdada horay loo bilaabay, waa inaad isla markiiba ka saartaa dhirta buka. Cayayaanka badiyaa waxay diraan boodhka dhoobada dhulka, kaabajka cagaaran iyo mealybugs.
Earthen boodhku wuxuu cunaa cagaarka, ka dibna godadka waaweyn oo ku yaal xaashiyaha. In dagaalka ka dhanka ah cayayaanka isticmaalay decoction of tansy iyo insecticides, inkastoo habka ugu fudud oo ugu wax ku ool ah waa qoyan ciidda ka yar duurka. Cabbage cabitaanka cabitaanka aphid ka soo geedka, waxay si tartiib tartiib ah u dhinto. Si loo ogaado infekshanka bukaan-socodka waxa uu noqon karaa dhibco cad, oo si tartiib tartiib ah u soo jiidan doona, iyo go'yaalkana waa la duubayaa. Iska ilaali cayayaanka adigoo daaweynaya xaako leh saabuunta saabuunta potassium. 300-400 g oo ah walax lagu kala diro 10 l oo biyo ah.
Haddii ay lagama maarmaan noqoto, nidaamku waa la soo celin doonaa 7 maalmood kadib. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa maraq tubaakada iyo anabizin sulfate. Mealybug cunaa soodhaha geedka. Waxay ka baxaysaa arrin caddaan ah oo ku saabsan Iberis oo u eg suuf. Waxay ku dhibtoodaan jilbaha iyaga oo marar badan ku buufinaya "Mospilan", "Fitoverm", "Aktar". Daaweynta gogosha ka soo cayayaanka waxaa la sameeyaa iyadoo loo marayo 7-10 maalmood. Dalbo iyo tubaako, tincture toon. Qaliinka ka hor, waa inaad si taxadar leh uga saartaa lakabka dhegta.
Guud ahaan, sheyga ayaa ah mid aan qabyo ahayn, waxaana laga heli karaa meel kasta. Waxay noqon doontaa quruxda weyn ee beerta. Waa in la xasuusto oo kaliya in dhibta ugu weyn ee ubaxu noqon doonto qoyaan xad dhaaf ah.
Dhakhaatiirta Real ee dagaalka - Dagaalka lafdhabarta ah ee digaagga Lari
Wasiir Ku-xigeenka ayaa ku dhawaaqay suuqyo wax ku ool ah oo ku saabsan dhoofinta beeraha Ukraine
Yaanyo "Casanova" - kala duwanaansho sare
Chickens Arbor Eikres
Tilmaamaha iyo sifooyinka Pelargonium Pak. Talooyin ku saabsan koritaanka ubax
Dhoobo dhar ah
Kala duwanaanta lafaha caanaha
Dhibaatada ka soo baxday fangasku waa mid si fiican u yaqaan dhammaan kuwa bannaanka u ah, kuwaas oo beerahooda pear ah nooc kasta oo koraya. Cudurkan ma aha oo kaliya muuqaalka muuqaalka geedka, laakiin sidoo kale dhaawici geedka. Maanta waxaannu ka hadli doonaa sida loo kala soocayo miraha ka soo jeeda cudurro kale, sida ay khatar u tahay, iyo sida loo daaweeyo. Read More
Sida loo takhaluso cayayaanka kaabajka